Isilinganiselwa sokuvikelwa kwe-Ingress
I-Outdoor Led Spotlight I-Camping Light
Okucacile Ukukhanya kwe-LED Ukukhanya kwe-1.19 ukukhanya kwe-LED 2.6V 4AH Ibhetri ye-Lead-acid I-adapter ye-3.AC/DC Imininingwane Yokuqala Indawo: Zhejiang, China (Mainland) Inombolo Yomfanekiso: Igama LikaS SSL-C205 Igama LikaMkhiqizo: i-LED Ukuzingela Ukukhanya ...
I-aluminium yokukhangisa i-7 imibala ye-LED Gift Keychain Light
♥ Itholakala kumbala we-7 futhi ungenza ngokwezifiso umbala wakho ozithandayo. ♥ Usebenzisa i-LED ye-Ø5 nxazonke ngesikhatsi sokugijima esiphezulu i-1.5h. ♥ Kunikwe amandla yi-4 * amabhethri AG3, okuyi ...
Amandla aphezulu aphezulu 1500 Lumens 3d Ipx7 Flashlight
♥ Nge-LOW PRICE enjalo, Ngeke uthole enye i-1500 Lumens Flashlight. ♥ Okumangalisayo nje i-chip ONE ye-LED, ngalokho sithola ukukhanya kwe-1500 Lumens. ♥ ...
Ikhodi ye-IP (Ingress Protection Rating) iqukethe izinhlamvu ze-IP ezilandelwa amadijithi amabili noma idijithi eyodwa nencwadi eyodwa kanye nencwadi yokuzikhethela. Njengoba kuchazwe emazingeni ajwayelekile e-IEC 60529, i-IP Code ihlukanisa futhi ikala amazinga okuvikelwa anikezwe ngokufakwa kwezinto eziqinile (kufaka phakathi izingxenye zomzimba ezinjengezandla neminwe), uthuli, ukuxhumene ngengozi, namanzi kumakhansela amashini nangezigxobo zikagesi. I-standard ihlose ukunikeza abasebenzisi ulwazi oluthe xaxa kunemigomo engacacile yokumaketha njengemanzi. Noma kunjalo, akukho hlobo lwezinga elikhishwa ngokukhululekile kubafundi abangavunyelwe.
Amadijithali (izinombolo zamagugu) akhombisa ukuhambisana nezimo ezifingqiwe kumatafula angezansi. Lapho kungekho isilinganiso sokuvikelwa ngokuphathelene nenye yezinqubo, leli nani lifakwa esikhundleni sencwadi X.
Ukuvikelwa kwe-ingress ye-liquid
Ukuvikelwa kwemishini ngaphakathi kwendawo yokuvimbela ingozi eyingozi yamanzi.
Izinga Ivikelwe ngokumelene Ukuhlola Yekuchumana
0 Akuvikelwe - -
1 Ukushayela amanzi Ukushayela amanzi (amaconsi awela phansi) ngeke kube nemiphumela eyingozi. Isikhathi sokuhlola: imizuzu engu-10
Amanzi afana nemvula ye-1mm ngomzuzu
2 Ukushayela amanzi ngenkathi ubhekene ne-15 ° Ukuphuza amanzi ngokuzenzakalelayo ngeke kube nomthelela omubi lapho ukufakwa okuhlanganisiwe kufakwe engxenyeni ye-15 °.
I-15 ° kusuka endaweni yayo evamile. Isikhathi sokuhlola: imizuzu engu-10
Amanzi afana nemvula ye-3mm ngomzuzu
3 Ukufafaza amanzi Amanzi awela njenge-spray kunoma yikuphi ukuphakama kuya ku-60 ° ukusuka obala ngeke abe nemiphumela eyingozi. Isikhathi sokuhlola: imizuzu engu-5
Ivolumu yamanzi: ama-0.7 amalitha ngomzuzu
Ukucindezela: 80-100 kN / m & sup2;
4 Ukusakaza amanzi Ukugeleza kwamanzi ngokumelene nalesi sakhiwo kunoma yiluphi uhlangothi ngeke kube nomphumela omubi. Isikhathi sokuhlola: imizuzu engu-5
Ivolumu yamanzi: ama-10 amalitha ngomzuzu
5 Ijetshi lamanzi Amanzi afakwe ibhulogi (6.3mm) ngokumelene nokuvalwa okuvela kunoma iyiphi indlela angeke abe nemiphumela eyingozi. Isikhathi sokuhlola: okungenani imizuzu engu-3
Ivolumu yamanzi: ama-12.5 amalitha ngomzuzu
Ukucindezela: 100 kN / m & sup2; kude no-3m
6 I-jets yamanzi anamandla Amanzi afakwe emajetsheni anamandla (ibhulogi ye-12.5mm) ngokumelene nokuvalwa okuvela kunoma iyiphi indlela angeke abe nemiphumela eyingozi. Isikhathi sokuhlola: okungenani imizuzu engu-3
Ivolumu yamanzi: ama-100 amalitha ngomzuzu
7 Ukucwiliswa kuze kufike ku-1 m Ingress yamanzi ngobuningi obuyingozi ngeke kwenzeke lapho ukufakwa okufakwe emanzini ngaphansi kwezimo ezicacisiwe zengcindezi kanye nesikhathi (kufika ku-1 m yokucwiliswa). Isikhathi sokuhlola: Amaminithi we-30 Ukucwiliswa ekujuleni kwe-1m
8 Ukucwiliswa ngaphandle kwe-1 m Imishini ifanele ukucwiliswa okuqhubekayo emanzini ngaphansi kwezimo ezizocaciswa ngumenzi. Ngokuvamile, lokhu kuyosho ukuthi imishini iyasimbelwa ngokweqile. Kodwa-ke, ngezinhlobo ezithile zemishini, kungasho ukuthi amanzi angangena kodwa ngendlela yokuthi akhiqiza imiphumela emibi. Isikhathi sokuhlola: ukucwiliswa okuqhubekayo emanzini Ukujula okushiwo umenzi
Ngokuvamile, isilinganiso se-IPX7 singanelisa izidingo zezemidlalo zangaphandle.